Turkey oo cambaareeyey warbixin kasoo baxday Sirdoonka Germany-Video • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / World News / Turkey oo cambaareeyey warbixin kasoo baxday Sirdoonka Germany-Video
Turkey oo cambaareeyey warbixin kasoo baxday Sirdoonka Germany-Video
March 20, 2017 - By: Omar Akhyaar
Xukuumada Turkiga ayaa si adag uga jawaabtay warbixin kasoo baxday Hay’ada sirdoonka dalka Germany ee loo yaqaan BND, warbixintaasi oo looga hadlay Inqilaabkii fashilay ee sanadkii hore ka dhacay wadanka Turkiga.
Warbixintan Sirdoonka Germany ayaa lagu eegay Afgembigii fashilay ee Militariga Turkiga isku dayeen, waxayna Sirdoonka Jarmalka shaki geliyeen in uu arrintan ka danbeeyey Wadaadka Gullen ee isagu ku nool dalka Maraykanka.
Xukuumada Erdogan ayaa horey ugu eedeysay Wadaadka Gullen inuu isagu ka danbeeyey inqilaabkii fashilay oo ay sameeyeen saraakiil lala xariirinayo Gullen oo hada ku sugan Maraykanka.
Madaxweyne Erdogan ayaa warbixintan ku tilmaamay mid muujineysa in Germany ayba si hoose u taageerto Gullen, isla markaana warbixintan ay tahay mid ay ku muujinayaan qorshaha ay u maleegayaan Turkiga.
Erdogan oo shalay meel fagaare ah khudbad uga soo jeediyey shacabka Turkiga ayaa ugu baaqay Turkida ku nool dalalka Yurub inay awood ku yeeshaan dhulka ay ku nool yihiin.
“…Qaab ka kaliya ee loogu jawaabi karo dalalka Yurub waa in walaalaheen Turkida ee dalalkaasi ku nool ay caruurtooda wax baraan, xaafadaha wanaagsan degaan, gawaarida ugu qurxoon gataan isla markaana aysan dhalin 3 caruur ah balse dhalaan 5 caruur ah…” ayuu yiri Madaxweyne Erdogan oo fariin dadban u dirayey dalalka reer Yurub.
Warbixinta Sirdoonka Germany ayaa la shaaciyey xili ay taagan tahay xiisad u dhaxeysa Turkiga iyo qaar kamid ah dalalka Midowga Yurub oo diidan in Xukuumada Turkiga olole ka sameyso gudaha dalalkooda iyadoo ka codsaneysa Turkida qurbe joogta ah inay taageeraan Aftida Dastuurka cusub ee Turkiga oo la qaadi doono bisha soo socota ee April.
Dowlada Somalia oo wadahadal ugu baaqday madaxda dowlad goboleedyada